Global Voices teny Malagasy » Fifaninanana Lahatsary: Dizitaly Mifamàka amin’ny Andavanandro · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 26 Janoary 2012 7:03 GMT 1	 · Mpanoratra Rezwan Nandika miora
Ny Centre for Internet & Society (CIS), India , sy ny HIVOS  any Pays-Bas dia mampiantrano ny Fifaninanana Lahatsary Digital AlterNatives  2011 ho ampahany amin'ny tetikasan'ny ‘Digital Natives with a Cause ’. Mirona manodidina ny fotokevitra “Dizitaly Mifamàka amin'ny Andavanandro” ary mangataka ireo mpandray anjara mba hizara tantara amin'io izay mahatonga ny fiainany andavanandro ho “dizitaly”.
Misokatra ho an'ny rehetra ny fifaninanana – matihanina, mbola vao misondrotra – afaka manao izany ny tsirairay eran-tany. Tsy misy fetran-taona farany ambony na farany ambany. (antsipirihany eto )
Iangaviana ianao hametraka ny tolo-kevitrao amin'ny alàlan'ny “Online Application Form ” alohan'ny 26 Janoary 2012.
Ity misy lahatsary iray  novokarin'ny Sekoly garabolan'i Harry McKillop, Melissa, Texas, mba hanehoana fa ireo dizitaly mifamàka amin'ny andavanandro dia mangetaheta fitarihana sy lalana mba hanandramana ireo fitaovana vaovao anànana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/01/26/27821/
 Centre for Internet & Society (CIS), India: http://www.cis-india.org/
 lahatsary iray: http://www.schooltube.com/video/71749c9dce554a87aa22/Hope-for-Technology-A-conversation-with-Digital-Natives